KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Daawo: Waxey u bixiyeen “Operation Restore Hope” // Black Hawk Down 21 Sano kadib
Nairobi (KON) - Kow iyo Labaatan Sano ayaa laga joogaa Maalintii Diyaaraddii Militeriga Mareykanka "Black hawk down" lagu soo riday Muqdisho 3 Oktoobar 1993.
21 Sano ayaa laga joogaa Markii Dagaalka dhexmaray Jabhadihii Dalka ay la galeen Ciidanka Mareykanka, ka dib markii kooxo Soomaali ahi ay dileen 24 ka mid ah askarta dalka Pakistan oo qeyb ka ahaa hawlgalkii UNISOM.
Illaa iyo Maanta Keydmedia Online ayaa ah halka Warbaahin oo Kaydkeeda ku haysatay wixii Maalintaas dhacay.
Cajaladaan aad Hoos ka daawaneysid waxaa 21 Sano kahor qaaday Agaasimaha guud ee Keydmedia Online Mudane Cali Saciid Xassan, waxaana Bogga Youtube ee Keydmedia soo saarnay Labo Sanno kahor.
Soomaalida intooda badan waxey xasuustaan dhacdadii loo yaqaan Black Hawk Down ee dayaaraddii Mareykanka lagu soo riday Muqdisho, laakiin ma Xasuusanaa Xasuuqi ay geesteen Askarta Mareykanka? Ma xasuusanaa Kumanaanka la dilay? Ma xasuusanaa Odayaashii la Xasuuqa?
Hadaba waxaan halkaan kugu soo Bandhigeynaa Filim 25 Daqiiqo ah oo ku tusinaayo Dagaalkii loo Magac bixiyay Operation Restore Hope.
Halkaan ka Daawo - DIGNIIN: Fadlan ha Daawan, hadaadan Awoodin!!: